KU SAABSAN US - Aquagem Pool saar Inverter Frequency
Taxanaha Single Speed
Aquagem Electric Limited waa qeybiyaha accessories pool ku salaysan in Panyu, Guangzhou, Shiinaha. Waxaan heegan u ah horumarinta iyo qeybinayay waxyaabaha smart iyo tamar keydinta macaamiisha caalami ah, si ay u bilaabaan la, drive a noqnoqoshada variable for bambooyin pool xawaare hal.
Hadafkeenu waa in aan sii isticmaala pool raaxaystaan ​​sahlo iyo faa'iidooyinka keenay by technology smart iyo in la yareeyo our print cagta carbon dioxide, taas oo u adeegta sida Hanuun of our shaqo geedi socodka of R & D, wax soo saarka, iibinta, marketing & adeegga, iwm oo dhan
waayo-aragnimo Customer waa wax walba. user pool kasta u qalmo in looga kharash-ool ah + tayo fiican leh + nidaamka pool oo lagu kalsoonaan karo si ay ugu soo baxay ay maalgashi oo wuxuu ku raaxaysan nolosha pool qoyska ka mid ah.
raacdada ee waayo-aragnimo fiican oo macaamiisha in waxyaabaha sida Converter noqnoqoshada, bambooyin kala duwan iyo adeega waa dhiirogelin daa'im ah ee Aquagem, taas oo ka dhigtay our shaqo macno leh.
In shirkad daba noqonayaa waayo-aragnimo macaamiisha, farsamo R & D waa laga reebo lahayn. Waa dhan ah oo ku saabsan cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka macaamiisha u baahan tahay, maskax this soo innagu khasabtey in fikrad fiican ee curinta in inverter soo noqnoqoshada iyo shubmo aan hadda soo koraya.
Madax by 6 injineerada sare kuwaas oo khibrad ku jira VFD iyo technology inverter, waxaan ku faraxsanahay in ay leeyihiin R & D waa koox awood badan, kuwaas oo si joogto ah kor ugu socda fikrado cusub.
Dhamaan waxyaabaha maray our kormeerka tayada adag ka hor dhalmada, waxa ku jira miridhku anti, anti-qoyaan, daaweynta ningax guddiyada elektaroonik ah, imtixaanka shaqada korontada alaabooyinka semi-dhammeeyayna, imtixaanka gaboobaya 60 degree Centigrade oo buuxa kormeerka waxqabadka ku saabsan alaabta la dhammeeyayna, jilo wax soo saarka in habka imtixaanka badasho ku tilmaamayaa in waxyaabo kala duwan saamayn saarka gaboobaya xaaladaha dhabta ah.